Mafirimu ekuona usati waenda kuParis kuti uzive iro guta zvirinani | Kufamba Nhau
Luis Martinez | 09/06/2021 11:49 | tsika nemagariro, Paris
Kana iwe uchinetseka nezve mafirimu kuti uone usati waenda kuParis, imhaka yekuti urikuronga rwendo kuenda kuguta guru reFrance. Iwe hauzodemba kufona kwacho Guta reKwayedza Iyo ndeimwe yeakanaka kwazvo pasirese. Iyo izere nezvivakwa uye nenyaya dzinozivikanwa dzinozokunakidza, asi zvakare iguta remazuva ano rine zvese zvaunoda kuti ugare usingakanganwike.
Chero zvazvingaitika, mafirimu ekuona usati waenda kuParis kuti isu ticha taura iwe uchakupa iwe maonero akasiyana eguta reSeine. Navo, unogona kuiongorora usati wabva pamba uye woona makona ayo, pamwe, iwe waisatomboziva kuti aivapo. Asi ino haisi nguva yekukura, pasina kumwe kunonoka, tichaenda kunopa mafirimu kuti vaone vasati vaenda kuParis.
1 Mafirimu ekuona usati waenda kuParis, kushanya chaiko kweguta
1.1 Hunchback yeName Dame
1.2 Marie Antoinette, imwe firimu yekuona vasati vaenda kuParis kunodzidza nezvenhoroondo yayo
1.5 Amelie, wekare pakati pemamuvhi kuti aone asati aenda kuParis
1.6 Hupenyu mu pink
1.7 Ratatouille, mupiro wekuratidzira kumafirimu kuti vaone vasati vaenda kuParis
Mafirimu ekuona usati waenda kuParis, kushanya chaiko kweguta
Rwendo rwedu rwemafirimu akanakisa akaisirwa muParis achakutora iwe kunguva dzakapfuura uko iwe uchazoziva nhoroondo yavo, asiwo kune azvino, kuitira kuti iwe uone izvo zvavari nzvimbo idzodzo dzizere nerunako izvo zvisingaoneke mumafambiro evashanyi. Ngatiendei nematepi atinotaura.
Hunchback yeName Dame
Kubva pane inoshamisa inoverengeka Mukadzi Wedu weParis wevakuru Victor Hugo, anopfuura rimwe bhaisikopo pane akati wandei. Zvichida inonyanya kufarirwa ihupenyu hwemhando yakaburitswa naDisney muna1996. Zvinotitorera kudzoka kuma medieval nguva kuti titaure nyaya yehunchback Quasimodo uye akanaka gypsy Esmeralda, avo vari muchiitiko cherudo, chigumbu uye kutsiva.
Zvese izvi na Notre Dame, kereke yekufananidzira muParis, sedanho repakati. Muchidimbu, nyaya yakanaka kwete isina vanhu vakaipa iyo yakaunzwa kune hombe skrini kazhinji.
Kana iwe uchida kuona vhezheni ine chaiyo vatambi, iwe une semuenzaniso mbeveve Mukadzi Wedu weParis, kubva 1923 uye inotungamirirwa naWallace Worsley. Vaturikiri vake vaive Lon chaney saQuasimodo naPatsy Ruth Miller saEsmeralda. Nekudaro, kana iwe uchida ruzha vhezheni, isu tinokurudzira iyo firimu yemusoro iwoyo zita rakapfurwa muna 1956 na Anthony Quinn mune iro basa rehunchback naGina Lollobrigida saEsmeralda. Mune ino kesi, iyo nzira yaive iyo yechiFrench Jean Delannoy.
Marie Antoinette, imwe firimu yekuona usati waenda kuParis kunodzidza nhoroondo yayo
Nyaya yemukadzi akarwara-rwara wa Louis XVI weFrance yakaunzwawo kune iyo huru skrini kazhinji. Isu tinokumbira iwe vhezheni yakatungamirwa muna 2006 naSofía Coppola chaizvo nemusoro we Marie Antoinette. Kunyangwe ichitarisa pahupenyu hwamambokadzi, iri zvakare yakanaka nzira ye Svika pakuziva iyo inoshandura Paris yekunopera XNUMXth century, mazhinji emamaki avo achiri kumira uye iwe uchakwanisa kuaona parwendo rwako rwekuguta.
Basa reanorwara-fated aristocrat rinotambirwa na Kristen dunst, apo yemurume wake, mambo, ari pamusoro paJason Schwartzman. Dzimwe nhamba dzakadai saJudy Davis, Rip Torn kana Asia Argento vanopedzisa vatambi vefirimu rakawana Oscar yeakanakisa dhizaini dhizaini.
Nekudaro, kana iwe uchida imwe yakasarudzika firimu, tinokurudzira iyo kubva 1939, zvakare yakanzi zita Marie Antoinette. Yaitungamirwa naWoodbridge S. Van Dyke, anokunda maOscar maviri e Kudya kwemanheru kwemupomeri y San Francisco. Kana vari vaturikiri, Norma Shearer Akaridza mambokadzi, Robert Morley akaridza Louis XVI uye Tyrone Power akaridza Axel von Fersen, anofungidzirwa kuti mudiwa wamambo.
Tsamba ye 'Les Misérables'
Zvakare zvinoenderana neanozivikanwa mazita na Victor Hugo, mumwe wevanyori akanyatsotora Paris yenguva yake, akaendeswa kumafirimu neterevhizheni kakawanda. A hit musical yakatogadzirwa zvichibva pakutamba.
Iyo vhezheni yatinokuunzira pano ndiyo yakatungamirwa muna 1978 naGlenn Jordan uye nyeredzi Richard Jordan mune basa raJean Valjean, Caroline langrishe saCosette uye Anthony Perkins saJavert. Mukati meiyo firimu isu tinoona zvikamu zve nhoroondo yeParis zvakadai seiyo Shanduko ya1830 uye, kazhinji, kune hupenyu hwezuva nezuva muguta reSeine yenguva iyoyo.
Nekudaro, kana iwe uchida kusarudza semuvhi chii chaunofanira kuona usati waenda kuParis kunobva Zvinoshungurudza imwe vhezheni, unogona kusarudza iyo yakaburitswa muna 1958. Mune ino kesi, director aive Jean-Paul Le Chanois nevaturikiri. Jean gabin, Martine Havet naBernard Blier.
Sarudzo yechitatu ndeye iyo yakadhirowewa terevhizheni se miniseries naJosée Dayan. Jean Valjean akamiririrwa na Gérard Depardieu, apo Cosette airidzwa na Virginie Ledoyen uye Javert naJohn Malkovich.
Kana mafirimu apfuura akakuratidza nhoroondo yeParis, Moulin Rouge zvakare inokuzivisa iwe kune iyo bohemian mamiriro eguta pakupera kwezana ramakore rechiXNUMX. Pamusoro pazvose, izvo zvemunharaunda yehunyanzvi ye Montmartre, uko iyo cabaret inozivikanwa iyo inopa iyo firimu zita rayo ichakamira nanhasi.
Iyi firimu yaitungamirwa naBaz Luhrmann uye yakaburitswa muna 2001. Inotaurira nyaya yemunyori wechidiki wechiChirungu uyo ​​anotamira kuguta reSeine, akwezva chaizvo nehunyanzvi hwayo hwebohemianism. KuMoulin Rouge uchasangana nevanhu chaivo vakaita semupendi Toulousse Lautrec, asiwo mutambi Satine, waachawira murudo naye.
Iyo yemumhanzi firimu iyo inokupa iwe yakakosha ruzivo kuti iwe uwane nharaunda yeMontmartre uye zvaunofanira kuona ipapo paunoenda kuParis. Asi isu zvakare tinokuraira iwe kuti utarise kune rwiyo rwayo rune simba, rwunosanganisira hukuru hukuru mambokadzi, Elton John o Nirvana.
Amelie, yakasarudzika pakati pemamuvhi kuti uone usati waenda kuParis
Iwo maviri Miri Kofi
Iyi firimu, zvakare yakaburitswa muna 2001, ndeyemhando yepamusoro pakati peye cinematographic mazano ekuti uone usati waenda kuParis. Iyo yerudo komedhi inotungamirwa naJean-Pierre Jeunet uye inoitwa na Audrey tatoo.
Iye anozviisa iye mushangu yemumiriri uyo anoshanda mu Iwo maviri Miri Kofi uye kuti anowana chinangwa muhupenyu hwake kana afunga kubatsira vamwe kuti vafare. Iyi firimu yakahwina ina César Awards uye yakasarudzwa kuma Oscars akati wandei, kunyangwe isina kuwana chero Asi pamusoro pezvose, inonakidza firimu yakawana budiriro huru neruzhinji.
Izvo zvakare zvakakwana kuziva Montmartre, uko iko cafe kunoshanda Amelie. Asi, kusiyana neiyo yapfuura, iyo nharaunda yatinoona mairi ndiyo yazvino. Kana iwe ukaenda kuParis, iwe unogona zvakare kunwa chinwiwa kuCafé de Los Dos Molinos.
Hupenyu mu pink
Muimbi Edith Piaf
Kana France kazhinji uye Paris kunyanya vane mucherechedzo munyika yenziyo, ndizvo Edith piaf, uyo akaberekerwa muguta reSeine. Iyi firimu inorondedzera, chaizvo, hupenyu hwemuimbi kubva paudiki hwake munzvimbo ine hurombo yeguta guru kusvika pasirese kukunda kwake.
Inotungamirwa naOlivier Dahan, yakatanga kuratidzwa muna 2007. Asi kana paine chimwe chinhu chakamira nezvazvo, iko kuita kunoshamisa kwe Marion Cotillard mune basa remuimbi. Muchokwadi, akawana iyo Oscar we Best Actress zvemaitiro ake, kuwedzera kune kumwe kumwe kuzivikanwa.
Kubatana naye mumutambo ndiGerard Depardieu saLouis Leplée, muzvinabhizimusi wemimhanzi akawana Piaf; Clotilde Courau mune basa ramai vemuimbi naJean-Pierre Martins semutambi wetsiva Marcel Cerdan, aidanana nenziyo diva.
Ratatouille, mupiro wemifananidzo kumafirimu kuti uone usati waenda kuParis
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, Paris yave nemakumi emakore chiri chiitiko cheiyo cuisine yakanaka kwazvo pasirese. Iyi ndiyo hwaro hwemufirimu uyu watinopedzisa kushanya kwedu kwemafirimu kuti tione tisati taenda kuParis.
Remy igonzo rinouya kuguta reSeine kuzadzisa chiroto chake chekuva shefu mukuru. Kuti uite izvi, inosvitswa mu Muresitorendi yaGusteau, chifananidzo chake chikuru. Ikoko iye achashanda pamwe neyakareruka dhishi rekushambidza dhizaini yakabudirira kwazvo muParis yese. Ndiwo matangiro ezviitiko zvehumwe hunhu.
Ndicho firimu remifananidzo yakaburitswa naPstrong uye yakaburitswa muna 2007. Kunyangwe director wayo aifanira kuve Jan Pinkava, zvakazoitika Brad Bird uye, pakunyunyuta, yaive nevatambi vechimiro che Peter O'Toole uye mutambi Patton Oswalt. Zvakare, pakati pemimwe mizhinji mibayiro, akawana iyo Oscar yeiyo yakanakisa animated firimu. Pakupedzisira zvinoshamisa maonero e Skyline kubva kuParis izvo zvinogona kuonekwa mune chimwe chezviitiko zvake.
Mukupedzisa, isu takurudzira zvimwe zve mafirimu ekuona usati waenda kuParis kusvika pakuziva guta guru reFrance zviri nani. Nekudaro, mamwe akawanda anokurudzirwawo. Semuyenzaniso, Charade, naAudrey Hepburn naCary Grant vachifamba mumahombekombe eSeine; Paris, Paris, Vane protagonists vanogara munzvimbo yemitambo muguta kuti vaite mimhanzi yavo, kana Hazvibviri, iyo inotiratidza kukosha kwehukama, asiwo nhamo yenharaunda dzekushanda-dzeguta rakakura. Uye, paunoenda, kutenderera Guta reChiedza, unogona kuverenga ichi chinyorwa nemazano edu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Cities » Paris » Mafirimu ekuona usati waenda kuParis
Tsika uye Tsika dzeUnited States